Ahoana ny fikajiana bisikileta amin'ny gradient? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Firy ny fiakarana mandritra ny hazakazaka an-tsehatra anio no hahatratra 10% ny gradien iray? - boky torolalana feno
Firy ny fiakarana mandritra ny hazakazaka an-tsehatra anio no hahatratra 10% ny gradien iray? - boky torolalana feno
Ahoana ny fikajiana bisikileta amin'ny gradient?
Noho izany, rehefa miresaka momba ny saika ny lalana rehetra talohabisikileta, afaka mampiasa tsotra isikaraikipohyny (fiakarana / hypotenuse) x 100 hatramin'nyvinavinany salanisan'ny lalanagradient, na dia tsy marina ara-teknika aza.22 2013.
Tamin'ny seho GCN vao haingana dia nanandrana nitady fiakarana an-tendrony indrindra sy lava indrindra eto an-tany izahay. Toy ny mahazatra dia maro aminareo no nanolotra ny sosokevitra narosonareo. Betsaka ka nanapa-kevitra ny hitondra ny safidin'ny tianay.
Eto dia tsy misy filaharana manokana. Misy ny fifanolanana raha io no lalana mamakivaky indrindra eto an-tany, fa ny tsy azo lavina dia ity Wallin tanteraka any Dunedin, Nouvelle-Zélande ity, tsy natao ho an'ny kely saina fa sahy nandray azy io, fa ny roa ny mpijery anay, Chris Rushand Chris Harvey, dia tsy hoe niakatra an-tampony fotsiny fa naka sary azy io ho anao roa. Ny ady Baldwin Street dia miady amin'ny zon'olombelona mirehareha amin'ny làlan'ny besinimaro farany izao, Canton Avenue dia any Pittsburgh any Etazonia.
Nahazo laza eo an-toerana izy io ho anisan'ny Dirty Dozen Ride, izay mananika ny tampon-tampon-tampon-tampon'i Pittsburgh be tohika mifandimby. Fantatrao tokoa fa havoana mideza izy io rehefa misy lalantsara eo akaikin'ny arabe, avy any Jawa Tengah, Indonesia izy io, misaotra an'i Sofia Nasharodin nanolotra azy. Fohy izy io fa araka ny ahitanao ny làlana malama mitambatra grady 1: 3 izay azon'ity tovolahy ity azo avela heloka satria mila fanentanana.
Betsaka ny fandefasana nataoko avy tany Angletera fa ity lahatsoratra avy any Yandabear ity dia nahatonga anay nitady hatsembohana. Herisetra cobbled 100 metatra amin'ny zoro lavitra ny tampon'ny Distrika any avaratr'i Angletera. - Ha! - Raha tsaraina avy amin'ireo expletives amin'ity lahatsoratra ity dia tsy maintsy mideza be izy ary misy 45 isan-jato farafaharatsiny.
Raha te-hitondra tena ianao dia ao anatin'ny hetsika fanatanjahantena Cheshire Cobbled Classic izay atao amin'ny volana Jona. Ity fiakarana ity no kilaometatra mideza indrindra any Etazonia manontolo isan-taona any Vermont Gran Fondo. Na dia misy fiakarana mideza kokoa aza ao amin'ity lisitra ity dia ho sarotra ny mahita lalana mijanona ao anaty tarehimarika indroa mandritra ny fotoana lava o manamora kokoa ny fitongilanan'ny tongotra.
Lou Mario dia nilaza taminay momba an'io hatsaran-tarehy kely io tao afovoan'i Porto. Avy eo amin'ny arabe lehibe, dia miditra amin'ny làlambe misy rarivato matevina miaraka amin'ny tehezan-tany efatra izay mitohy. Ny hany fampiononana dia ny fahitana azy tsara tarehy avy any ambony.
Yaniv Yahouda dia nandefa izany avy tany Israel tany ivelan'ny tanànan'i Ein Hud. (pantan) Ny zavatra manokana momba an'io dia ny fahafahanao mandeha amin'ny fidinana mikoriana mankany amin'ny rindrina tanteraka ao anatin'ny segondra. Eo afovoany dia miadana izy ary avy eo miakatra 20 isan-jato indray eo akaikiny.
Azo antoka ny milaza fa haka ny momentum rehetra avy amin'ilay fidinana izy vao hahavita azy amin'ny lafiny iray. Tsy ho lisitry ny fiakarana mihanika ity raha tsy nanao fitsidihana an'i Belzika izahay. Araka ny voalazan'i Cohen Monsieur, ny lalana mankany Saint-Vithis no kilometatra lava indrindra ao amin'ny Ardennes, izay mahavariana tokoa raha jerena ny maha-havoana ity faritra ity.
Ity farany dia avy amin'i Joseph Kendrick's Easy Finding Steep Hill ao an-tanànan'i San Francisco, fa i Joseph kosa nitady ilay fantsona farany hitany ary nivadika ho sisin-dàlana akaikin'ny Broderick Street izany. Tianay fotsiny ny vokany tsara amin'ny fo marina. (mikiakiaka) Ka tohizo, fiakaran-dàlana sivy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Nihanika ny iray tamin'ireny ve ianao ka nahita zavatra lalina kokoa? Ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany ary mbola alefaso aminay ihany ny sarinao sy ny lahatsoratrao amin'ny Facebook, Twitter ary Instagram miaraka amin'ny diezy # GCNSTEEP. Iza no mahalala, angamba afaka manao lahatsoratra hafa isika amin'ny ho avy. Raha mila lahatsoratra bebe kokoa momba ny fiakarana mideza dia zahao Tom Lastclimbing ny Muro de Aia any amin'ny Basque Country ao anatin'ny andiany miakatra epiko.
Tena mila jerena ny mino azy. Ary raha efa nanontany tena ianao raha tsara kokoa ny miala eo amin'ny lasely amin'ny fiakarana 30 isan-jato dia zahao ny fitsapana siantifika nataon'i Simon avy any Jones Street any San Francisco.
Ahoana ny fikajiana ny sokajy fiakarana?
Manapa-kevitra nysokajyan'ny amiakatraampitomboinay ny halavan'nymiakatra(amin'ny metatra) miaraka amin'ny naotin'nymiakatraamin'ny Strava isan-jato. Azo kilasiana ho voasokajymiakatrany totaliny dia tokony ho 8000 na mihoatra. Amin'ny teôria dia toa tsara izany, tsotraraikipohyafakaSokajymisymiakatrana aiza na aiza, tsy misy foto-kevitra.
Ahoana ny fiakaran'ny sokajy grava?
Sakafotanjona ny tanjona, ka raha fiakarana nosokajyFiakarana 1 io dia ho foana asokajy1. Ho hitanao fa ny fizarana iray dia voasokajy amin'ny isa ao amin'ny pejy fizarana na amin'ny lisitry ny fizarana ao amin'ny pejin'ny hetsikao.22. 2021.
Tsy mamirapiratra ve i Harlech any Wales, James? - Ie, sakaiza. Tsara izany - Fantatrao ve fa ny Harlech Castle dia nanomboka nanorina tamin'ny 1283 ary izy no fiarovana mafy ho an'i Owain Glyndwr, lehilahy Wales farany nitaky ny anaran'ny Prince? an'i Wales? Ary ny hira Men of Harlech, eny, tokony ho tamin'ny fito taona nanaovana fahirano an'io lapa io tamin'ny 1481? - Ny tiako holazaina, ry vady, tena mahaliana ity ary tsara sy tsara daholo, fa maninona no nentinao tany North Wales aho tamin'ny volana Febroary mba hanome izany? lesona lesona momba ahy ve aho? Raha te-ho ara-drariny, azoko natao ny nandefasana google. - Andraso, andraso, andraso.
Satria nilaza koa i Harlech fa izy no manana ny làlana farany lava indrindra eto an-tany. Ary eo izy. Eny, tsy mila mangataka intsony izy ireo.
Ofisialy ofisialy. Hatramin'ny 16 Jolay 2019, nanamafy ny Guinness World Records fa i Ffordd Pen Llech ao Harlechi no lalana madiodio indrindra eto an-tany. Ny lohateny dia nitazon'ny Baldwin Street tany Dunedin, Nouvelle-Zélande tamina haavo 35%.
Saingy taorian'ny namoizako izany anaram-boninahitra sy fiadiana ny amboara eran-tany cricket izany dia tsy herinandro tsara ho an'ny Kiwis - Nandresy lahatra ahy i Ollie mba ho any North Wales any afovoan'ny ririnina mba hahitana raha azontsika atao ny mitaky fiakarana haingana indrindra amin'ny làlana farany ambony indrindra GCN afaka. Toa tsy ho vita izany, saingy natoky tena hafahafa i Ollie. Buddy, mideza ity. (Mihomehy i James) Wales sy Nouvelle-Zélande dia mitovy ihany, vady, samy manana orana be izy ireo, samy manana tendrombohitra - samy tia ondry izy ireo - eny, saingy manana kiwi i Nouvelle-Zélande, manana papango i Wales. - Manana lay.- Raha ny voalazan'i Strava dia 330 metatra ny fiakarany ary gradient 16% eo ho eo no 36 eto.
mahazaka tarika misy tahony
Ka nieritreritra izahay fa handrefy izany ny tenanay mba hahitana raha tena izy, James, tadidinao ve ny GCN haitao avo lenta? Gauges? - Eny sakaiza - Inona izany? - Inona, findaiko. Inona? Manao ny zava-drehetra izy ireo amin'izao andro izao. Jereo izany, 36% heveriko fa tsy afaka mitaingina an'ity sakaiza ity ianao - nijery an'i Strava fotsiny aho, olona sahabo ho 600 ihany no miakatra eto, heveriko fa manana vintana tsara tokoa isika hahatonga ny KOM amin'ny làlana mideza indrindra an'izao tontolo izao! Mahafinaritra tokoa izany? - Raha ny ara-drariny dia milay be ity. - Ie. - Saingy lalana tokana izany, sa tsy izany? - Aza matahotra fa nieritreritra an'izany aho.
Ao ambony rihana dia misy lehilahy manana fambara. Nifandray tamin'ny vondrom-piarahamonina aho, nosakanany ny lalana indrindra ho anay. - Ary, ry sakaiza, mideza be izy io, tsy afaka miarina any aho. - Nieritreritra an'izany koa aho.
Niandry iray andro aho niaraka tamin'ny tailwind 22 mph. Tena hahagaga izany! - Saingy tsy noeritreretinao izany ry vady, tsy manana ny bisikiletako akory aho ka tsy afaka manao azy akory. - Tsia, nofonosiko ho anao izany. - Sa ianao? - Ie - Oh sakaiza.
Marina, mieritreritra aho fa vonona - Vonona ve ianao, te-hanandrana? - Apetraho ny kodiarako - Fandeha fanampiny mahafinaritra, tiako izany. - Eny, jereo izay azontsika atao. - Jereo raha mahavita azy ianao. (Feo miteniteny) - Ao amin'ny lasely! - Ny tsy fantatr'i James dia natakaloko ho an'ny 39:23 ny fitaovany (mihomehy izy)! - Tena mandeha tsara io. (mozika orkestra manome aingam-panahy) - Manidina eny, nanao ahoana? - huh? - Ahoana izany? - Sarotra. - Ie? Sarotra ve izany - Ie.
Zahao Strava. - Faharoa ao amin'ny Strava ianao. Faharoa ianao ao amin'ny Strava.
Lalao marina, izany! - Aiza no ahitanao an'io? - Satria nahazo 1: 26.1 nahazo: faha-2 ny 26, tsy vaovao farany fotsiny ianao, fa ho tonga.- Oh, 2 ..- Fairer 1.2. amin'ny fiakarana farany izao indrindra eto an-tany, tena tsara izany, izany.
Nanova fitaovana aho, na izany aza, adinoko ny milaza aminao. - Oh, sa ianao? - Ie. Alefaso ny 39:23 anao - Oh! - Nieritreritra fotsiny aho fa hahamora kokoa anao io - navelako ny kodiarana, tsapako fa mitaingina bisikileta. (Nihomehy i Ollie) Nieritreritra aho hoe:
Eny ary, mieritreritra aho fa ny anjaranao no namanao. - Andriamanitra ô, homeko azy io. - Fa manana ny bisikiletanao Climbs ianao. (Ollie maneso) Mora, ny fiarovan-doha fiakarana, rivotra rambo.
Buddy, ianao irery izany, anao ity. Afaka mahatsapa azy io (mozika elektronika mihenjana) Faly be aho amin'izany 1:26 andraso kely, Ollie, eo amin'ny bisikileta e-ianao ve ianao? Amin'ny bisikileta e? (mozika orkestra manome aingam-panahy) (Mihomehy i James) Andao, Ollie! Ah, manidina eny ambony izy ry sakaiza. - mpiara-miasa. - Skid mahafinaritra, lalao ara-drariny, nitondra e-bisikileta ianao. - Fantatro - nitondra e-bisikileta niaraka taminao ianao. - Hainao ve fa? Nataoko.
Vao nanao izany aho ary nanao izany, sa tsy izany? - Ianao izao no olona haingana indrindra eto an-tany miakatra fiakarana mafy indrindra eto an-tany. Fantatro fa tsara izany, tiako ho lazaina - Ahoana izany fahatsapana izany? - Tsara fotsiny, tiako holazaina, ity rakitsoratra ity dia haharitra mandrakizay. Tsy hitako izay mikapoka an'io, tiako holazaina hoe iza no ho malahelo hiandry andro fitsangatsanganana goavambe, hahazo torohevitra hanakanana ny làlana ary hitondra bisikileta e? - Tsy misy olona, ​​Buddy - Okay ry zalahy? - Iza izany? Buddy, ity dia i Dan Evans, nasionaly, tsara, Tompondakan'ny firenena marobe.
Inona izy? eto ve no ataony? (mozika orkesitra epic) - Buddy, mety tsy ho azony izany. Eny tompon-daka amin'ny tendrombohitra nasionaly izy ary eny, afaka mipetraka 800 watt mandritra ny iray minitra izy, saingy matevina, mando izy, mando ary somary haingana kokoa ianao. Azonao ilay izy. - Ie, heveriko fa marina ny anao.
Oh, nahazo mailaka fotsiny. Nisy naka ny KOM-nao. - Tsia. - Tsara ve ianao, ry sakaiza? - Manao ahoana ianao? - Ie tsy maninona aho.
Manao ahoana ianao? - Lehilahy milalao - Tsara, eny. - Matokia ny tenanao hiseho! - Eny, iray amin'ireo havoananay eo an-toerana! - Inona no tokony ho antonony anao teto an-tany tamin'izany? - 600 watt mandritra ny iray minitra sy 11. Ezaka lehibe. - Nataonao mora foana ilay izy. - Ah, tena henjana, fiakarana mafy tokoa. - Ka nananika fiakarana be dia be ianao.
Ahoana ny endriny? - Eny, fiolahana mideza tokoa io, mideza toa azy. Fohy izy io, nefa masiaka. - Eny, tsara, tsara jerena ary arahabaina noho ny fiakarana tampon'ny KOM eto amin'izao tontolo izao.
Misaotra Dan Evans, tompon-daka nasionaly teo an-tendrombohitra taloha. Marina izany, antenaina fa nahafinaritra anao ity lahatsoratra ity sy ny fiezahanay malemy haka ny COM - Nanandrana izahay, sa tsy izany? - Raha izany dia mba omeo thumbs up izy ary misoratra anarana amin'ilay fantsona ary raha izany dia te hahita lahatsoratra momba ny fiakarana fironana mideza ianao dia tsindrio eto ambany.
Inona no atao hoe fiakarana sokajy 5?
SakaMiakatra 5- Ireo naotymiakatrano sarotra kely indrindra amin'ireo sokajy rehetramiakatra. Ny fomba mitovy amin'izany dia ampiasaina amin'ny famaritana ny fahasahiranan'izy ireo amin'ny Cat 4miakatrafa izy ireo no sarotra indrindra amin'ny isa rehetramiakatra. rehetramiakatrany isa dia mifototra amin'ny halaviran-toerana, ny fanovana ny isa / ny haavony ary ny haavony avo indrindra.
Ny fiakarana miakatra dia sarotra be, koa aza atao sarotra noho ny tokony ho izy. (Mozika faly) Na dia maharitra na fohy aza ny fiakarana, ny fomba mahomby sy mahomby indrindra hahatongavana any an-tampony dia ny fisorohana ny vidin'ny tsirairay amin'ny famaranana feno amin'ny voalohany ary hiditra amin'ny trosa oxygen ary avy eo mihodina ny sisa tavela miakatra amin'ny fanjakana somary mampalahelo. Ka aza mitsoka sy mamita miadana; milamina hahazoana fandresena dia tsara daholo, fa aza miditra lalina loatra.
Chris Froome dia tsy afa-miala amin'izany intsony, miaraka amin'ny fomba milina fanasan-damba mahavariana, fa ho antsika olombelona tsotra kosa mihodina amin'ny taha ambony toy izany dia tsy hoe adala fotsiny, fa tsy mandeha amin'ny laoniny. Raha midina ambany loatra ianao dia hiadana fotsiny. Amin'ny faran'ny lafiny hafa amin'ny cadence dia avo loatra ny tahan'ny fitaovana.
Amin'ny lafiny maro, mbola ratsy kokoa noho ny fandikan-teny ambany io. Fa maninona Voalohany, azonao atao aloha ny manimba ny lohalinao noho ny tselika sy ny adin-tsaina apetrakao. Faharoa, tsy dia hahomby amin'ny mekanika fotsiny ianao - atsaharo ary esory ny bisikileta.
Mahatsapa ny may, fa miodina foana ny pedal. Fantaro hoe rahoviana ianao no tokony hiova amin'ny fotoana mety. Ka aza amin'ny faritra mihanika indrindra amin'ny fiakarana raha vao mihetsika ianao.
Ny tselatra amin'ny alàlan'ny mech dia mahatonga ny fitaovanao hikororoka sy hikororoka ary matetika mahatonga ny rojo hitohy. Ny tsara indrindra dia mipetraha ary esory alohan'ny fanovana maranitra rehetra. Miezaha ihany koa ny tsy hiova avy amin'ny peratra lehibe mankany amin'ny peratra kely rehefa mametraka tselatra be dia be amin'ny bisikileta ianao, satria matetika io dia mety hitarika rojo vy.
Na dia tafavoaka tamin'io fotoana io aza aho. Mifindra moramora, aza very ny lalan-kalinao. Tena henoko ianao manontany anao Eny, tena izy, satria hitako manokana io o tena manandrana mivoaka ny lasely ary mitazona ny tendron'ny amnom-by.
Aza atao fotsiny. Zara raha mifehy ny bisikileta ianao ary mety hiafara amin'ny fanalana olona miala amin'ny lasely ary ho toy ny plonker feno sy tanteraka. Ary izany no anglisy ho an'ny adala na aiza na aiza faritra.
Aza mananika ny tampon'ny tampony fa tsara kokoa amin'ny rano mitete na sarona. Sorohy ny famenoana sakafo amin'ny sakafo rehetra, ohatra.
B. mofomamy na bara misy angovo, eo am-bavanao raha mitaingina mafy amin'ny fidinana ianao, indrindra fa ny lava-bato. Rehefa manao izany ianao dia mila manandrana mitsoka amin'ny alàlan'ny sivana sakafo malemy sy voatoto, izay mety hahatonga anao hitsoka na handoa na ho sempotra amin'izay hohaninao.
Aza atao izany, mahatsiravina koa izany. Omeo fotoana hitsakoana ny tenanao sao manidina na mandrora. Ankehitriny dia hanaiky ahy tokoa ianao fa ny fisorohana ireo hadisoana fiakarana ireo dia hiteraka traikefa tsara kokoa amin'ny fiakarana.
Ary tianay ny maheno ny lesoka nianika anao koa. Avelao izy ireo amin'ny hevitra etsy ambany. Ary raha mbola tsy nisoratra anarana tamin'ny GCN ianao dia azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanindriana ny tany eto ary tsy hahita lahatsoratra GCN hafa mihitsy ianao.
Ankehitriny noho ny hadisoana am-bisikileta folo voalohany tsindrio eto. Ary ho an'ireo fialantsiny folo amin'ny bisikileta farany ambony indrindra amin'ny fihanihana, tsindrio fotsiny etsy ambony ary aza adino ny mankafy sy mizara ity lahatsoratra ity.
Inona no atao hoe gradient 5%?
Raha lazaina amin'ny fomba tsotra; isaky ny 100 metatra mandroso ianao dia mandeha mitsangana tongotra vitsivitsy, avy eo apetraho famantarana isan-jato aorian'io elanelana avo lenta io dia azonaogradient. Ohg Raha miakatra ianaoDIMYtongotra rehefa mandroso 100 metatra ianao, a5% naoty.
Inona no fiakarana sarotra indrindra amin'ny bisikileta?
Hors cat? Gorie (HC) dia teny frantsay ampiasaina amin'ny sehatrabisikiletahazakazaka voatondro amiakatraizany dia 'mihoatra ny fanasokajiana'. Ilay teny dia nampiasaina tany am-boalohany ho an'ireo lalana eny an-tendrombohitra izay tsy nampoizin'ny fiara fa afaka nandalo. Ny HCmiakatradia nysarotra indrindrakarazanamiakatraamin'ny hazakazaka.
Inona no atao hoe bisikileta fiakarana sokajy 4?
Sokajy 4:miakatra250 ka hatramin'ny 500 metatra ny haavony.Sokajy3:miakatra500 ka hatramin'ny 1.500 metatra ny haavony.Sokajyroa:miakatra1,500 ka hatramin'ny 3.000 metatra ny haavony.Sokajy1:miakatra3.000 ka hatramin'ny 5000 metatra ny tombony azo amin'ny haavony. Hors Cat? Gorie (HC) na Ambony / AnkoatraSokajy:miakatra5 000+ metatra ny haavony
Inona no gradient ambony indrindra?
Io ilayfaratamponyna steepestgradientizay avela omena amin'ny làlana izay tsy tokony hihoatra ny faritra rehetra amin'ny lalana amin'ny maha steeper kokoa azygradientsdia tena manelingelina ny fifamoivoizana, indrindra ny fifamoivoizana miadana.
Nisy nahazo fandresena 3 Grand Tours tao anatin'ny herintaona?
Tsy misy mpitainginamananaHATRANYnandresy daholoTELOfitsangatsanganana lehibe ao akalandrie tokanaTAOM-na dia Chris Froome sy Jacques Anquetil azanandresy daholoTELOfitsangatsanganana lehibeao anatin'ny sivy volana mahery izay misy kalandrie roataona.
Inona ny gradient farafaharatsiny?
Talohan'ny afarafaharatsinyatoro nygradientdia ratsy, ao amin'nyfarafaharatsinynygradientaotra ary aorian'nyfarafaharatsinymariho fa tsara izany.
Inona no gradient antonony amin'ny fiakarana tendrombohitra?
Tsaroanao fa ny 326W no wattage takiana rehefa mandinika ny fahombiazan'ny drivetrain 95%, izay mifandraika amin'ny 310W eny an-dalana - ny hery ilaintsika hampiasaina amin'ity kajy ity. Ho an'ity kajy ity dia mila gradient antonony amin'ny 1 amin'ny 20 koa isika izay mihoatra ny 4% (tsy 5% araka ny tondroin'ny anaran'ny fiakarana).
Sarotra ve ny mitaingina gradient 10%?
Ankehitriny ny ampahany 10 - 13% dia sarotra, eny, handeha miadana izaitsizy ianao ary mety hijoro mandritra ny zato heny alohan'ny hipetrahanao ary hamerenanao ny fizotranao kely hamitahana ny sainao hieritreritra fa tsy ratsy izany. Fa rehefa tonga amin'ny farany ianao dia tantara iray hafa tanteraka.
Inona ny tanjon'ny gradien fiakarana miainga?
Fomba fialan-tsasatra hiakatra gradient ary manisa ny tahan'ny fiakarana. Ny tanjona voalohany amin'ny fizotry ny fialana dia ny fanomezana fahazoan-dàlana sakana. Ny tanjona faharoa dia ny fampitomboana ny fahombiazan'ny seranam-piaramanidina be mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny isan'ny fifandraisana sy ny fahatarana amin'ny fiainganana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fomba fiaingana mialoha na ny SID.